Thin Nwe Htwe says:
mine always turn out so soft 🙁
Win Pa Pa says:
wai phone says:
ဟုတ်ပါ့ ကျနော်တို့ကတော့ တိုဟူးသုတ်ဆို ရှမ်းသုတ်ကိုပိုကြိုက်တယ် နံနံပင်လေး ရိတ်ရိတ်လှီးထည့်တယ် ၊ ရှောက်ရွက်နဲ့သုတ်တာ သိတ်အာမတွေ့ဘူး
I will try to add gram or lb also later.. Thanks
Yaw Thu says:
အင်း လက္ဘက်ရည်ဇွန်းနဲ့ စားပွဲတင်ဇွန်း တစ်ဇွန်းစာ ဆိုတာကို ကွဲကွဲပြားပြား မသိလို့၊ နည်းနည်းလောက် ရှင်းပြပေးပါ့လား ညီမ။
လက်ဘက်ရည်ဇွန်း ဆိုတာ လက်ဘက်ရည်ဖျော်ရင်သုံးတဲ့ ဇွန်းကို ပြောတာပါ။ စားပွဲတင်ဇွန်းကတော့ သာမန်ဟင်းပွဲတွေမှာ သုံးတဲ့ ဇွန်းပါ။ လက်ဘက်ရည်ဇွန်း ၃ဇွန်း = စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်းနဲ့ ညီမျှပါတယ်…
sis ..my tofu can say okay but the texture and taste are like ဖွယ်ဖွယ်ကြီး. Then still can smell the Gram powder:(. Why does it become like that ?
I put 500ml of powder and 1250ml of water can say correct amount of powder and water. May be just because of heat and duration . When I stirred about 3mins the paste became think and the more I stirrer, the more thicker. Why sis ? Any idea?
တို့ဟူးကျိုတုန်းက ကုလားပဲအစိမ်းမှုန့် အကျက်နည်းနည်းလိုသွားလို့ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဖွယ်ဖွယ်ကြီး ဖြစ်သွားတာက ရေကျန်သေးလို့ပါ။ ခုနောက်ပိုင်း ကုလားပဲအစိမ်းမှုန့် အစား တုိ့ဟူးကျိုတဲ့ အမှုန့်သုံးရင် အစိမ်းနံ့လည်း မထွက်ဘူး၊ လုပ်ရလည်း လွယ်ပါတယ်.. Plz try again sis! 🙂
Aww … that’s mean I can buy ready made Tofu powder is it ? Sis Do you have any picture of this ? And or-else how to call in English?
ရန်ကုန်မှာတော့ ၀ယ်လို့ရတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာတော့ ရမရ မသိဘူး။ Tofu powder လို့မေးကြည့်ရင်တော့ ရမယ်.. Thanks 😛
အိန္ဒိယားဆိုင်တွေမှာ ရှိပါတယ်၊(chickpeas powder) SWAD ဆိုတဲ့တံဆိပ်နဲ့လာပါတယ်၊ အထုတ်သေးဆို (တပေါင်ထင်တာဘဲ) ၁ ဒေါ်လာကျော်ဘဲရှိပါတယ်။ အဲဒါနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်
အမေရိကားမှာပြောတာပါ။ တခြားတိုင်းပြည်တွေမှာလဲ အိန္ဒိယ ကုန်စုံဆိုင်ဆိုရမယ်ထင်ပါတယ်။
For me the texture, color, taste & smell all of them are fine but it still soft even though i cool down for3hrs aldy. 🙁
တို့ဟူးကျိုတဲ့အခါ ရေများလို့ ဖြစ်မယ်။ ဒါကြောင့် ပျော့တာ။ အဲဒီလောက် အကြာကြီး ကျိုစရာ မလိုဘူး ညီမရဲ့.. Plz try again..
i’ve already tried and everything is good as you said,Thank you, sis.
Glad to hear sis! 😀
Thank you for the tofu recepie as i did try it today n so easy n quick. Tase also very good. Thank You Naw A Ma.
Glad to hear sis 🙂
၀တ်၇ည် ညီမလေးေ၇ အမ အကြိုက်ဆုံး အစားအစာပါ။ ကျေးဇူးတင်တယ်နော်။
အမကတော့ တို့ဟူး ကိုယ်တိုင်မကြိုဖြစ်ဘူး။နောက်တစ်ခါ ကြိုပီးစားလိုက်အုံးမယ်နော်။
may thingyan says:
sis tell me other Burmese salad!
as i love our Myanmar food!
Myitzu Aye says:
thanks.. wutyee.. i’ve been looking for this receipe and finally found in your website.. i will try it tmr..
Plz try it sis, 🙂
မ စိတ် မ ဆိုး နဲ့ နော် အား လုံး ရဲံ့ commet တွေ ကို စိတ် ရှည် ရှည် ဖြေ ပေး လို့ အ ပျို
ကြီး လား သိ ချင် လို့ ပါ ညီ မ က အခု မှ မ ရဲ့ web ကို ဖတ် မိ တာ
ဖတ် မိ ချင်း ပဲ အ ရမ်း သ ဘော ကျ သွား ပါ တယ် ချစ်လို့
ဟားဟား စိတ်မဆိုးပါဘူး ညီမရေ။ ကွန်မင့်တွေကို ၁ပတ်တစ်ခါလောက် ကြိုးစားပြီ ဖြေပေးပါတယ်။ အပျိုကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ အိမ်ထောင်ကျတာ ၃နှစ်ခွဲလောက်ရှိပြီ… 🙂
မမ ရေ တို့ ဟူးသုပ်ဆိုကြိုက်တယ်။ရှမ်းပြည်မှာဆိုပဲနှစ်နဲ့ သုပ်တာလေ။ပဲနှစ်လုပ်နည်းလေးသိရင်ပြောပြပါနော်။
ok I will try to post later
ayan kaung tae**********
Thanks par sis 🙂
ဝတ်ရည်ရဲ့ နည်းအတိုင်းလုပ်တာအရမ်းကောင်းတယ်။ မီးအပူချိန် နဲနဲကွာသွားလို့ထင်တယ် ရေနဲနဲလေးလိုက်ပြီးကျိုလိုက်တော့အစိမ်းနံ့ ပျောက်သွားတယ်။ ကျေးဇူးပဲနော်။
Naw Mu Mu says:
အမရယ် ….. ဘာလိုနေလဲမသိဘူး.. အရမ်းပျော.တယ်
မမရေ ရှမ်းတို့ဟူး လုပ်နည်းလေးပြောပြပေးပါနော်။ ရှမ်းတို့ဟူးက မြန်မာတို့ဟူးထက်ပိုနူးညံ့လို့ အရမ်းကြိုက်လို့ပါ
Rosalind Nan Myat Mya Khet says:
Thanks Sis,do you have cook books? And where can I buy? Now, I am in Yangon. Thanks.